Njengoko bekulindelwe, ithuba kwimarike yasemva kwe-COVID itshintshile. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku kubonakala kucacile ukuba itshintshelwe ukuthanda abanini bepropathi kunye nabatyali bezindlu. Njengokuba ibango lokuhlala ixesha elifutshane kunye neendawo zokuhlala eziguqukayo ziqhubeka nokunyuka, nabani na onedilesi- nokuba likhaya eligcweleyo leholide okanye igumbi lokulala nje kuphela — ubekwe kakuhle ukuze enze imali kulo mkhwa. Xa kuziwa kwimfuno yokurenta yexesha elifutshane, phantse akukho siphelo emehlweni. Ukongeza, akukho kunikezelwa ngaphakathi